Xulashadii Gudoomiyaha Kaambaynka Kulmiye Ee G.Awdal & Furahii Guusha –Qalinkii: Abdishakur Gande | Hangool News
Xulashadii Gudoomiyaha Kaambaynka Kulmiye Ee G.Awdal & Furahii Guusha –Qalinkii: Abdishakur Gande
October 7, 2017 - Written by Hangool
Gudida ollolaha xisbiga kulmiye ee heer qaran laantiisa gobalka awdal waa mid kamida astaamaha guusha iyo gacan saraynta tartanka doorashada madaxtooyada somalilaan.
Gadh-wadeenka ama gudoomiyaha gudida kaambaynka gobalka awdal ee xisbiga kulmiye waa shakhsi miisaan culus iyo milgo kuleh giddi ahaan gayiga somaalilaan gaar ahaan gobalka gudoomiyaha kaambaynka uu ka yahay oo uu magac mug wayn oo muuqda uu ku leeyahay.
Wasiir Axmed X.Daahir Cilmi ahna gudoomiyaha kaambaynka gobolada galbeedka waa ruug cadaa maamul horumarineed iyo mid siyaasadeed ba kuleh… wasiirku, wuxuu mid ka ahaa haldoorkii hirgaliyay wadatashiyadii gobalada galbeedku horumarka ku gaadheen waa na halyaygii
ugu horeeye xiliyadaa adkaa diyaarad gargaar iyo gurmad ah kasoo dejiyay boorama. Axmed, wuxuu kasoo qayb qaatay yagleelkii jaamacada camuud.
Marwalba wuxuu ahaa tiir u taagan nabada, horumarinta, cadaalada iyo midnimada.
Wasiir Axmed, waa shakhsigii ugu horeeye ree awdal siyaasada kasoo gala xaga qurbaha iyadoo madaxwayne AHUN CIGAAL iyo guurtidii xiligaa ay ugu yeedheen in uu kaqayb qaato xukuumada Cigaal maandaamo loo gartay inuu samato bixin karo qaranka saranseerka ah gaadhsiin na karo halka hiigsigu yahay iyo himilada umadu tahay.
Axmed X.Daahir Cilmi Ducaale, ayaa hormood ka ah siyaasiyiinta tirada yar ee siyaasada maalka ku bixiya si’uu u hirgaliyo hadafka iyo himilada uu halganka ugu jiro libinta na u hantiyo….
Axmed X.Daahir, wuxuu labojeer oo hore usoo noqday wasiirka wasaaradaha qorshaynta iyo warfaafinta mudo xileedkiisi na wuxuu ku caan ahaa maamul wanaag iyo waxqabad ilaa maanta la munaafacaadsado oo loo aayay lagu na mahadiyo dhaxalkuu kategay waayo waa wax muuqda oo la taaban karo.
Gudoomiye Axmed, wuxuu ahaa shakhsigii ree awdal iyo xisbigii udub oo quus kala taagnaa isku tolay ee axmed dartii xisbiga udub ku helay codkii ugu badnaa oo xaqiiqiyan kasbashada axmed maahe sidakale dhinac ku lid ah udub ay badi bba ree awdal ahaayeen.
Axmed X.Daahir, xiligii ururadii wuxuu noqday murashaxii madaxwayne ku xigeen ee xisbigii udub taasi na waxay siixoojisay saamayntii wanaagsanayd ee axmed dalka ku lahaa wuxuu na sii kasbaday kalsoonidii gobalada galbeedka halkaaso shacbiyadiisu kusii xoogaysatay.
Gudoomiye Axmed, waa masuul wada deeqa shacabka awdal oo isku sidka ama mideeya shacabka gobalada galbeedka.
Sidaadarteed, axmed waa siyaasiga kali ah ee albaabkasta istaagi kara guri walba na cod ka raadin kara ee ollolahiisa ama kaambaynkiisa lagu khasaari karin.
Sikaste ha ahaate, arimahaasi kooban ayaa qayb yar ka ah ujeedooyinka axmed x. Daahir loogu magacaabay wasiir iyo gudoomie kaambayn xiliga doorashadu taagan tahay waayo wuxuu hantay kalsoonida madaxwaynaha, murashaxiinta iyo ribitaanka shacabka sidaasaa na loogu gartay in lasaaro masuuliyada ugu culus maandaamo gobalka awdal yahay gobalka guusha axmed na yahay furaha ama siyaasiga midnimada ee marlay ree awdal la saftaan halkuu hadba danta gobalka ku hogaamiyo.
0634200882 —– 0634454882
Borama, Awdal somaliland.